I-Dreame H11 Imanzi futhi Yomile, ukuhlaziywa okujulile | Izindaba zegajethi
I-Dreame H11 Imanzi futhi Yomile, ukubuyekezwa okujulile kwalesi sikhala / i-mop
UMiguel Hernandez | 28/12/2021 10:59 | General, Izibuyekezo
Ngidumise igama Ihlala ibekwe njengenye yezinkampani ezihlinzeka ngekhwalithi engcono / isilinganiso samanani emkhakheni wokuhlanza izindlu ezihlakaniphile, ikakhulukazi uma sikhuluma ngama-vacuum cleaners, amarobhothi nezinye izesekeli ezigxile ekwenzeni izimpilo zethu zibe lula uma kuziwa ekuhlanzeni indlu yethu. .
Kulokhu sibheka kabanzi i-H11 Wet and Dry entsha, isicoci sevacuum esishanela sijule futhi sikhuhle ngephasi eyodwa. Sikubonisa lo mkhiqizo omusha we-Dream futhi sikutshela ukuthi umuzwa wethu ube yini ngokusetshenziswa njalo kwalo mkhiqizo oguqule umkhakha lapho kunganikezwa ezinye izindlela eziningi.
2 Okuqukethwe kwephakheji namandla
3 Izici zobuchwepheshe nolwazi lomsebenzisi
5 Izinzuzo nokuqeda
Uma ubhejela uhlobo olufana ne-Dreame, usuvele wazi ukuthi yini ongayilindela mayelana nomklamo nezinto zokwakha, kubonakala ngokuqedwa okuhle namapulasitiki alula kodwa aqinile anikeze iningi lemikhiqizo yawo ubuntu obungenakuqhathaniswa, futhi bekungeyona ube mncane ngesicoci esisha se-H11, esingasihlobanisa ngokushesha nohlobo lwase-Asia ngokubuka nje. Ubukhulu bugqame kakhulu, futhi lokhu kuhambisana nesisindo esiphelele sokuzungezile 4,7 kg emzimbeni onehaba.
Le divayisi emangalisayo ingaba eyakho ngentengo engcono kakhulu
Induduzo ngeke inqobe, lokho kuyabonakala, nokho ama-roller ayo namandla ebhulashi kuzokwenza kube lula ngathi ukwenza amapasi. I-Porting iyinkimbinkimbi kakhulu, ngakho-ke ukufakwa kwesiteshi sokushaja nokuzihlanza esizoba phansi. Ngokuqinisekile asibheki umkhiqizo womkhiqizo olula futhi oguquguquka kakhulu, nokho-ke, kufanele sicabangele izinjongo ze-Dream H11, kude nokuhlanza okulula nokujwayelekile, kunalokho kugxile ezindaweni ezinkulu futhi nokufinyeleleka okuningi. Konke lokhu kufanele sikucabangele ngaphambi kokuqhubeka nokuthenga.
Okuqukethwe kwephakheji namandla
Kude nalokho okungase kubonakale, le Dreame H11 iza ngephakethe elihlangene kahle, isibambo se-aluminium silula futhi siyakhipheka, ngaphezu kokusivumela ukuthi silawule ukusebenza kwesicoci se-vacuum ngezinkinobho ezithinta kahle. Umzimba onenjini, umshanelo kanye namathangi amanzi amabili ugxunyekwe ngqo ebhokisini, futhi zonke izingxenye ezigugile nezilungiswayo ziyakhishwa, njengoba kwenzeka njalo ku-Dream. Ngohlelo "lokuchofoza" sizobeka isibambo futhi sizoba ne-Dreme H11 ehlanganiswe ngokugcwele ukuze siqale ngokuhlolwa kokuqala.
Okuqukethwe kwephakheji njengoba sesishilo kuyi-spartan impela, sithola umzimba omkhulu lapho ithangi eliphindwe kabili, injini kanye nomshanelo, isisekelo sokushaja nokuzihlanza, kanye ne-adaptha yamandla kanye nohlobo "lwebhulashi" ukufakwa kwawo kwamanzi noma uketshezi lokuhlanza oluzosisiza ukugcina amathange amanzi ehlanzekile. Kulesi sigaba i-Dream H11 isinika umuzwa omuhle, ukufakwa kuyashesha futhi asizange sifune imiyalelo ukuhamba. Kumele kuqashelwe ukuthi i-Dream ihlanganisa uketshezi oluthile lokuhlanza esizokwazi ukuluthenga ngokushesha ngokwehlukana, nakuba singakatholi iphuzu lokuthengisa.
Sekushiwo lokho, ungase uzibuze ukuthi kungani sikhuluma ngobuningi "Amadiphozithi", Lokhu kungenxa yokuthi iDreme H11 inamathangi amabili ahlukene, elinye lamanzi angcolile angu-500ml okuyilona elitholakala ngaphansi komshanelo; kanye namanzi ahlanzekile angu-900ml okuyiyona ephethe ukuhlinzeka nge-mop ngoketshezi lokuhlanza. Leli thangi lamanzi angcolile yilapho liphinde libe nesibopho sokuzalela ukungcola esikuncela.
Iphaneli yezinkomba zemisebenzi phezulu izosibonisa izindlela ezimbili zokuhlanza: Okujwayelekile kanye ne-Turbo. Ngendlela efanayo, izosazisa mayelana nephesenti lebhethri elisele nokuthi imodi yokuzihlanza isebenza ngaleso sikhathi, okudingeka ibe esiteshini sokushaja. Yile ndlela esibanjeni esithola ngayo izinkinobho ezimbili ngaphambili ukuze sibambe amandla ahlukene okuhlanza, neyodwa engxenyeni engenhla yesibambo ephethe ukwenza kusebenze imodi yokuzihlanza.
Izici zobuchwepheshe nolwazi lomsebenzisi
Okokuqala sizokhuluma ngokuzimela, I-Dreme H11 inebhethri elingu-2.500 mAh elizosinika imizuzu engu-30 yokuzimela ngemodi evamile, lokhu kuzoncipha ngokuphawulekayo uma siya kulokho i-Dremee ecabangela imodi ye-turbo. Ngakolunye uhlangothi, isicoci se-vacuum sine- 10.000 amandla okumunca i-pascal, iphansi kancane kunalokho ekunikezayo kwamanye amadivaysi afana nezicoci zayo eziphathwa ngesandla ezidume kakhulu, lapho ingafinyelela ku-22.000, okungukuthi ibhulashi layo elijikelezayo lifinyelela kuma-revolution angu-560 ngomzuzu Kuzosiza ukubamba ukungcola okufakwe kakhulu futhi lokhu kuvumela idivayisi ukuthi isebenze ngamandla aphansi okudonsa.
Ngakolunye uhlangothi, umsindo uzofinyelela ku-76dB futhi esilela kakhulu emiphumeleni engcono kakhulu ibhrendi ekwazile ukuyinikeza kwamanye amadivaysi. Njengenzuzo, sinethuba lokuyithenga Amazon, nazo zonke iziqinisekiso ezibandakanya lokhu.
Enye yezinkinga eziyinhloko esizitholile, ngaphezu kwesisindo, ukushuba kwebhulashi, okuzosivimbela ukuba singene ngaphansi kwefenisha ethile, ngendlela efanayo futhi sicabangela indawo ye-Dream H11, ngabe kuyathakazelisa ukufaka nokukhanya kwe-LED kubhulashi. Ngokwengxenye yakhe, futhi njengoba bekulindelekile, umphumela we-parquet uyalimaza, amanzi amaningi azoshiya amamaki abonakalayo, noma kunjalo, lokhu kungumkhiqizo oklanyelwe ngokukhethekile phansi kwe-porcelain, itshe kanye ne-vinyl, lapho imiphumela ibe ngcono kakhulu.
Le Dreame H11 iwumkhiqizo omusha obeka amazinga okufanele alandelwe emkhakheni njengereferensi, yize inamaphuzu angaphawuleki kangako njengesisindo nokufinyelela okunzima ngaphansi kwefenisha, inamandla amahle okumunca, izinto ezinhle kakhulu zokwakha kanye nokuqeda futhi kuzokwenza izinto zibe lula kakhulu kithi inqobo nje uma singenayo i-parquet noma izitezi zokhuni. Intengo yayo iseduze ama-euro angama-320 ezindaweni ezijwayelekile zokuthengisa njenge-Amazon.
H11 Imanzi futhi Yomile
Kuthunyelwe ku: December 28 we-2021
Ukulungiswa kokugcina: December 28 we-2021
Izinto eziqedwe kahle neziqinisekiso zokuklama
Amandla amahle kanye nokuqedwa kwe-porcelain okuhle
Ukufinyelela okubi kufenisha ephansi
Imiphumela emibi ku-parquet
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Dreame H11 Imanzi futhi Yomile, ukubuyekezwa okujulile kwalesi sikhala / i-mop
I-Dream D9 Max, ukuhlaziywa kwesicoci se-vacuum irobhothi esisebenza kahle kakhulu
I-Tronsmart ONYX PRIME, ukuhlaziywa nokusebenza